Ixesha Elifanelekileyo Ukuhambisa Ifulegi KwiGalfu (okanye Cela Kuyo)
Ngaphezulu, indlela efanelekileyo yokuthambisa iflegi
Umgaqo-nkqubo wokulwela iflegi, okanye ukucela ukuba enye i-golfer ifake iflegi kuwe, ngamanye amaxesha kunzima ukuqala igalagi ukuqonda. Ngoko masiqwalasele ngakumbi.
Xa udlala umdlalo ovela eluhlaza , ibhola lakho legalufu alivumelekanga ukuba libethe i- flagstick . Oko kuthetha ukuba kufuneka ususe iplagi yeflegi kwendebe ngaphambi kokucima i-putt yakho (okanye ubhekane nesohlwayo).
Ngakolunye uhlangothi, ngamanye amaxesha ukususa isikhonkwane kwenza umngxuma unzima kakhulu ukubona.
Ufanele ujonge njani umgodi ukuba awukwazi ukuyibona?
Yingakho kuqhelekile ukubona abagadi begolfu "bekhwela iiflegi" omnye komnye. Ukulwela iflegi kuthetha ukuba uMdlali A umi eduze kwefowuni ukuze uyisuse kwindebe emva kokuba uMdlali B axabise i-putt yakhe. Okuvumela uMdlali B ukuba abone umgodi, kodwa ugweme ukuhlawulwa ngenxa yokushaya ipini.
Ngoko ungayicela nini umntu ukuba athathe iflegi kuwe?
Nanini ufuna. Kulungile ukuba iflegi ixhaswe nayiphi na ipuphu, ukusuka kuyo nayiphi na indawo kwindawo yegalufa . Kodwa kwihlabathi lenene, abadlali bacela ukulwela iflegi ngokuyinhloko xa bezama ukubeka ixesha elide (xa benokuba neengxaki zokubona umgobo ngaphandle kweflegi). Abadlali ngamanye amaxesha banokucela ukuba iflegi ifakeke xa iphuma kwi-green.
Yaye kwaye kufuneka nini na iiflegi kumnye umntu?
Ufanele ukuthabatha iflegi ukuba:
Omnye wabalingani bakho abadlala nawe ucela kuwe; okanye
Unika ukuhambisa iflegi enye umdlali, kwaye loo mdlali uthi yebo.
Kuqhelekileyo xa bonke abadlali begalufa bebeka eluhlaza kumntu othile kwiqela ukuba abuze, "Hayi, ubani ofuna iflegi?" Ukuba impendulo ayikho, i-flagstick ingasuswa kwaye icwangciswe eceleni (yibeke kwindawo eluhlaza, ngaphandle komgca wokudlala).
Njengesidima, abadlali kufuneka bahlale bekhwela iiflegi omnye komnye xa kucelwa.
Qinisekisa ukuba kuyimfuneko ukuba unyanzela iflegi ukuba ilungiswe (oko kukuthi, awukwazi ukubona umgodi ngaphandle kwayo, okanye ungaqiniseki ngombono wakho umgodi ngaphandle kwayo) .
Kwakhona phawula ukuba ukuba i-flagstick isengaphakathi kwendebe kwaye akukho mntu uyayilungisa, kwaye umdlali ubeka ngaphandle, musa ukukhawuleza ukususa i-flagstick. Ukuba uthabatha ifulegi ngaphandle kwebhola ngelixa ibhola lihamba eluhlaza, kuyigwebo kuwe ukuba awuhambanga kwiflegi ukuqala.
KwiMigaqo yeGalofu , iimeko ezibandakanya i-flagstick zifakwe kwiNqununu 17 .
Inkqubo ehlaziyiweyo: Indlela yokwenza iflegi
Sondela kwefowuni uze ubambe kuyo, emele ubude bengalo. Qaphela abadlali abahlukeneyo ukubeka imigca, uqinisekise ukuba awuhambanga ngaphaya okanye umile kumnye umntu obeka umgca.
Yima uhlale ucelile ukuze ungaphazamisi umdlali onobujongayo. Emva kokuba i-golfer idibanisa nebhola kwaye ibhola iqala ukujikeleza kwindebe, yiphakamise i-flagstick ngaphandle kwendebe.
Qinisekisa ukuba uphakamise ipini ngqo ngqo - ungayiguquli okanye uyikhuphe kuwe. Sichaza oku ngenxa yokuba eso sigqabha singagxininiswa kwindebe, kwaye ukuba uyayikhupha ngokukhawuleza okanye ngaphandle kokunyamekela kunokwenzeka ukuba unokukrazula i-cuper, nayo.
Njengoko ibhola iyasondela, hamba kude nomngxuma kunye nefowuni, kwakhona, ukuba uqaphele ukuba ungangeni kuyo nayiphi na imigca yegolfu.
Thatha i-flagstick ekupheleni kwendawo eluhlaza kwaye uyibeke phantsi kwindawo yokubeka. Beka i-flagstick endaweni apho kungenokwenzeka ukuba ubenokubetha ibhola xa umntu efuna ukuphosa ngesifo sakhe.
Xa kudlalwa umgca wendawo, buyisa i-flagstick uze uyitshintshe kwindebe.
Buyela kwi-FAQ okanye i- Golf Course FAQ
Iifoto ezimangalisayo zeGymnast Photos
Yintoni iYurchenko Vault?
Isingeniso esilula kwi-Tennis Scoring for Beginners
Indlela yokuLahla i-Pverse Punch
Umfazi weBhati: Umntu wesifazana?
Isikhokelo sokusekela izibophelelo zakho zokuCoca
IJografi kunye neMbali yeTuvalu
Indlela yokuvavanya nokufundisa ukuqonda ukuFunda